Khilaafka RW Rooble iyo Cabdi Xaashi oo cirka isku shareeray | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Khadar Xariir oo kamid ah shaqaalaha Villa Somalia ayaa Maanta markale loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga doorashadda Xildhibaanada gobollada Waqooyi [Somaliland].
Doorashadan ayaa sameeyay hal dhinac, garabka Mahadi Guuleed oo ku ku xiran Farmaajo, iyadoo ay ka maqnaayeen afarta xubin ee Cabdi Xaashi uu magacaabey, kuwaasoo RW Rooble ugu hanjabay inuu kuwa kale ku bedelayo.
RW Rooble ayaa si deg deg ah islamarkii ay dhacday doorashadda u hambalyeeyay Khadar Xariir, waxayna arintan cirka ku shareertay khilaafkii Ra'iisul Wasaaraha kala dhaxeeyay Cabdi Xaashi ee ku saleysan gudiga Somaliland.
Cabdi Xaashi oo ah odeyga ugu da'da weyn siyaasiyiinta Somaliland, ee ku jira dowladda ayaa ku eedeeyay Rooble inuusan dhexdhexaad ka ahayd khilaafka isaga iyo Mahdi Guuleed, kadib markii sida uu sheegay dhowr jeer balanta uga baxay.
Tartan ayaa ka jira kuraasta Somaliland, oo mucaaradka iyo Farmaajo ku loolamayaan, waxaana arintan ay keeni kartaa dib u dhac kale doorashadda Soomaaliya, oo maalin walba khilaaf horleh uu soo baxayo.
Kuraasta gobollada Waqooyi, kuwa Koonfur Galbeed, HirShabeelle iyo Galmudug waa codad uu Farmaajo ku tashanayo dib u doorashadiisa, iyadoo ku bixinayo dedaal kasta sidii uu ugu guuleysan lahaa, waxaana kala shaqeynaya Fahad Yaasiin.
Comments Topics: cabdi xaashi rooble soomaaliya